HGH ukulahlekelwa isisindo Thailand | Sebenzisa i-hormone yokukhula yomuntu ukulahlekelwa amafutha
I-hormone yokukhula (somatotropin, i-HGH) abantu abaningi ku Thailand zihambisana nezinqubo zezigijimi zokwakha imisipha. Indlela okuyiyo - i-HGH inomthelela oqinile we-anabolic, ikhuthaza ukukhula kwemisipha, iqinisa isimiso somzimba futhi idale nomphumela wokuvuselelwa okuphelele. Ngoba la mathuba avela ekwenzeni ukunciphisa amafutha omzimba ngokuvamile alahlekelwa ukubona, kepha ngeze - i-hormone yokukhula ukushisa amakhilogremu engeziwe.
Ngomfanekiso, ungajika ekutadisheni kwe-University of Bangkok ku-1998, lapho abantu abadala be-24 bathola khona umthamo wansuku zonke we-2 mg - 5 mg HGH izinyanga eziyisithupha. Phakathi nalesi sikhathi ubukhulu bomzimba wabo abuzange buyeke, kodwa isilinganiso phakathi kwemisipha kanye nezicubu ze-adipose sishintshile ngokuphawulekayo - ngokwesilinganiso, umhlanganyeli ngamunye wathola ama-5.5 amakhilogremu emisipha futhi, okubaluleke kakhulu, walahla i-5.7 kg yamafutha. Futhi ukulahlekelwa okukhulu kwamafutha kuphawulwe esiswini. Akumangalisi ukuthi okokugcina kwakuyizidakamizwa njengeGenotropin, i-jintropin ne-ansomone nezinye izidakamizwa zokukhula kwezidakamizwa ezithandayo kubadlali abaningi abafuna ukunciphisa amaphesenti amafutha omzimba.
I-hormone yokukhula isisindo sokulahlekelwa kanjani?
Ingxenye enkulu yezindawo ezivuthayo zamafutha e-HGH kuhlotshaniswa nomthelela walo ku-metabolism. I-Metabolism, Kuyaziwa ukuthi cishe noma yiliphi iseli emzimbeni womuntu linikwe amandla ngamafutha amaningi noma i-glucose. Futhi uma inani le-glucose egazini lilawulwa i-anabolic Insulin hormone, inani lamafutha e-hormone ekukhuleni. Umgomo ofuna ukufinyelela ukulahlekelwa kwesisindo nokunciphisa kwamafutha, ukuphoqa amaseli ukuba adle amafutha amaningi kune-glucose. I-insulini ayiyona impendulo - igcina i-glucose ezingeni elijwayelekile futhi lilondoloze ezindaweni ezincane. Kunoma yikuphi, kubangela ukuthi amangqamuzana adle ukuthi i-glucose, hhayi fat, okwandisa ukwakhiwa kwamafutha acids esibindi.
Kodwa i-HGH iyinhlobo yokuphikisa i-insulini, izama ukunciphisa ukusetshenziswa kweglucose yeselula futhi imphoqe ukuba idle ama-acids amaningi. Ukwenza lokhu, uzifaka embranini yamaseli amafutha futhi usebenza njengendlela yokuthutha ethatha amafutha e-fatty, ebafaka egazini, futhi ubapha oksijini. Ngamanye amazwi, iguqula inqubo ye-lipolysis, okungukuthi ukunciphisa inani lama-fat cells. Futhi okubaluleke kakhulu, ayikho ama-fat cells aseHGH angeke ashiye okuqukethwe kwawo futhi angabhubhi. Kodwa uma amangqamuzana omzimba adinga amafutha amaningi, futhi ukwehla kwamangqamuzana amafutha ngaphansi kwesenzo sokukhula kwe-hormone ukukhula, futhi ukugqugquzela amafutha avela kwidiphozi kuzokhula, okuzoholela ekulahlekeni kwesisindo. Uma ufuna ngempela ukufingqa, umzimba uqala ukudla amanoni ayo. Futhi ngenxa yalokhu, okokuqala futhi okubaluleke kakhulu, udinga inani elanele lokwanda kwe-hormone.
Inkambo ye-hormone yokukhula yokulahlekelwa isisindo eBangkok
Kunezinhlobo ezimbalwa zemigomo ye-hormone yokukhula. Ngamunye wabo uhlose izinhloso ezehlukene futhi kungcono ngaphambi kokuletha noma ngubani wabo ukuthi axoxe nodokotela eThailand. Noma, okungenani, ukuqinisekisa ukuthi ukulahlekelwa isisindo akukho izinkinga ngamahomoni wegciwane kanye namahomoni ezocansi, ngaphandle kwalokho imiphumela ekulindeleke ye-HGH nje ayibonakali.
I-classic ye-HGH yokunciphisa isisindo nokuthola ukukhululeka kwemisipha iqala ngezijovo ezingaphansi kwezingxenye ze-2 zomuthi nsuku zonke. Uma bengabonakali imiphumela emibi (ngezansi), bese isonto lesibili ungakwazi ukwandisa umthamo kwizinyunithi ze-5, kodwa akukho khona isikhathi esiningi emzimbeni wama-hormone amakhulu okukhula okuyoholela ekuqinisekiseni ukuthi ama-pancreas uzama ukulinganisa yonke inani elifanele inani elifanele le-insulin lisebenza ngokugcwele.
Qaphela: Ngezinye izikhathi ngisho nokunconywa ukusiza ama-pancre kulokhu ngokwenza ama-injection engeziwe e-insulin. Kodwa kubalulekile ukuthi amasu asetshenziswe ukusetshenziswa kwe-hormone yokukhula emazingeni aphezulu, ngaphezu kwamaunithi we-5 ngosuku.
Ukujova i-hormone yokukhula uma emzimbeni kudala izimo ezingcono kakhulu, okusho ukuthi ushukela wegazi usancishisiwe. Isikhathi ngaphambi kokudla (isikhathi esihle esithombeni esingenalutho ekuseni) nangesikhathi noma emva kokuvivinya umzimba okukhulu, lapho ushukela udliwe emsebenzini wokuzivocavoca. Kunconywa ukujova kwangaphakathi, nakuba kwakukhona imibono emihle mayelana nokufakwa kwe-HGH intramuscularly. Kuvame ukujova esiswini, okusiza ukuthi ukhombe ukushisa amafutha kule ndawo.
Esikhathini senkambo yokuthuthukisa umphumela we-HGH isidingo sokungena embusweni wokuqeqeshwa kwezemidlalo, ngokuyinhloko emandleni, izikhathi ezingu-2-3 ngesonto. Ukuqeqeshwa kwamandla ngezikhathi ezithile kudinga ukuhlanzwa i-aerobic. Ukuze usize i-hormone yokukhula ishintshe isidumbu emzimbeni we-fat metabolism, ungangenisa ukudla okune-carbohydrate-free. Ku-General, nakuba kuncoma ukuthi unamathele ekudleni kokudla kwekhalori (okusho ukuthi udle futhi uchithe cishe ngesilinganiso esifanayo samakholori), ngisho nesifunda sokunikezwa kwamandla ngamakhamori angaphezu kwamandla angenza amafutha afisa afuthe.
Phakathi nenkambo yokulahlekelwa kwesisindo esihle kunconywa ukuphuza nokunye ukulahleka kwesisindo - ukukhula kwe-hormone cishe akuphikisani nanoma yimuphi wabo. I-hormone yegciwane ikakhulukazi, isib. Thyroxine (100-150 μg nsuku zonke) noma i-triiodothyronine (25 μg nsuku zonke). Akukhona nje kuphela ukuthi amafutha ashisa ngokwabo, kodwa futhi nomphumela omuhle kwi-gland yegciwane. Futhi ngesikhathi se-hormone yokukhula uyayidinga - i-HGH inqabela umsebenzi wayo futhi ingase iholele ekunyuseni kwayo, ukuze amahomoni e-thyroid kule nkathi ezosiza ukunciphisa ukubonakaliswa kwemiphumela emibi.
I-ECA kanye nesizinda se-clenbuterol esikhathini sokukhula kwe-hormone futhi kwandisa imiphumela yakho yokushisa fat, nakuba kunjalo, kwandisa ingozi yemiphumela yabo emibi.
Imiphumela emibi ye-HGH
Eqinisweni, i-HGH iyimvelo yomzimba womuntu. Isibonelo, uma uneminyaka yobudala, ivolumu yayo "eyakhe" ebantwini incishisiwe, ukuze ukubuyiswa kokuthola i-HGH kwangaphandle kubheka into engalimazi, ikakhulukazi uma ingagciniwe i-hormone emzimbeni. Lena yimiphumela emibi ye-HGH. Ngokuvamile kuqhathaniswa ne-steroids (umphumela ufana, futhi usebenzise amaqembu afanayo abantu), kodwa awuphazamisi ukukhiqizwa kwama-hormone ocansi, futhi ngenxa yesenzo esithile sezenzo sinemiphumela embi kakhulu. Kanti futhi emva kokuhamba kwe-hormone yokukhula akudingeki ukuba ukwelashwa kwe-post-cycle, kubuye kukhulume ngokuphepha kwakhe.
E-Thailand kukhona inkolelo yokuthi ukusetshenziswa kwe-hormone yokukhula kwesisindo kuholele ekwandeni kwezindlebe, impumulo, izihlathi, ulimi, i-cartilage, amathambo (ngokubonakala kwamabhomu amabi ezindaweni zamalungu amalunga), inhliziyo kanye nezinye izitho zangaphakathi (esibonelweni esinikezwe "izici zomzimba ezikhulelwe" yizigijimi ezisebenzayo eziye zakhula izidumbu futhi manje ziyisisu esisodwa esisodwa). Konke lokhu kungakwenzeka ngempela, kodwa kuphela lapho uhlukumeza lesi sidakamizwa ngesilinganiso esidingekayo semilinganiselo ephakanyisiwe. Ukusetshenziswa okuvamile kweHGH kwesisindo sokulahlekelwa okufanayo.
I-side effect real side effect ye-HGH - carpal tunnel syndrome, ekhonjiswe ukunganaki kwamalungu. Kodwa kuhlotshaniswa nokucindezeleka kwemizwa emaphandleni kwanda imisipha, ngakho izinga lokulahlekelwa kwesisindo linomngciphezi omncane we-syndrome.
Umthelela omubi kuma-pancreas ne-gland yegciwane, njengoba kushiwo ngenhla. Imithi - i-insulin namahomoni wegciwane, ngokulandelana. Ngemuva kokuyeka ukusebenza komzimba we-hormone, izigulane zilulame.
Umthelela ohlangothini oluvame ukwanda komfutho, okungavimbela noma ukunciphisa ukulinganisa kwe-HGH, noma imithi eyanciphisa ukucindezelwa kwegazi.
Ukuthenga i-hormone yokukhula cishe isigaba esibaluleke kunazo zonke esikoleni sakhe. Iqiniso liwukuthi iningi le-dieters lithenga i-HGH kubathengisi "ngezandla" noma ngamawebhusayithi angabazayo. Kodwa i-75% yesidakamizwa eThailand i-fake ephukile. Futhi ngisho nabangani bangempela abazithengile bangase bangasebenzi ngenxa yokuthi lezo zigcinwe ngokungalungile - HGH kufanele zihlale esiqandisini, zandisa impilo yayo.
Esinye isiphetho ukuthenga i-hormone yokukhula kuphela ikhemisi. Kuyinto imithi evinjelwe, kodwa kuphela yezemidlalo (ukuphinga). Thenga i-hormone yokukhula yesisindo ongayithola ngokusemthethweni eBangkok. Imithi eqinisekisiwe i-HGH yiyona "I-Genotropin","I-Ansomone"futhi" i-Jintropin "." Futhi "ethandwa kakhulu", "i-Tops" futhi "i-Norditropin" iyinkokhelo ye-100%. Ngisho nalapho uthengisa ikhemisi eqinisekisiwe yezidakamizwa akufanele ukhohlwe ukuhlola isitika sokuvikela emaphaketheni okuhlanganiswa nabakhiqizi ukulwa nokukhohlisa.